မချစ်မနှစ်သက်သောသူနှင့် အတူနေရခြင်းဒုက္ခ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မချစ်မနှစ်သက်သောသူနှင့် အတူနေရခြင်းဒုက္ခ
Posted by who who on Oct 6, 2011 in Buddhism, Creative Writing, Science & Religion |5comments
နောက်ဆုံး ရန်သူကြီးတစ်ပါးကတော့ “မချစ်မနှစ်သက်သောသူ” ဆိုတာပါပဲ ။ “မချစ် မနှစ်သက်သောသူနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်း” သည် လူတိုင်းအတွက် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲကို ဖြစ်စေတယ်မလား ။ “ချစ်သောသူ နှင့် ကွေကွင်း ရခြင်း” ကမှ စိတ်ထဲမှာဖြေတတ်ရင် ၊ နေတတ်ရင် တော်သေး တယ်လို့ ပြောရပါမယ် ။ ဒီမချစ်မနှစ်သက်သောသူကြီးနဲ့သာအမြဲ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ နေရရင်တော့လည်း ဒုက္ခဆင်းရဲကြီးက လွတ်ဖို့ လမ်းမမြင်တော့ပါဘူးနော့ ။
ဒါပေမယ့်လေ ခုတော့ တို့မှာ ဒီ ဒုက္ခ ဆင်းရဲ ကြီးနဲ့ အမြဲ ပူးတွဲနေရပါတယ်နော် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခန္ဓာ ရထားတာကိုး ။ ဒီခန္ဓာကို ရထားလေတော့ ဇာတိဖြစ်လာသမျှကတော့ အိုရမယ် ၊ နာရမယ် ၊ သေရဦး မယ်နော် ။ အင်း ဒီ အို ၊ နာ ၊ သေ နဲ့ ခွဲနေလို့ရော ရသေးရဲ့ လား ။ သူ့ကိုရော ချစ်ကြရဲ့လား ။ လိုချင်ကြရဲ့လား ။ ဒါကြောင့် ခု ပြောချင်တဲ့ “မချစ် မနှစ်သက်သောသူ” ဆိုတာသည်ပင် ဒီ အို ၊ နာ ၊ သေ ၊ ကို ရည်ညွန်းတယ်ဆိုတာ ပေါ်လာပါပြီ ။
အင်း လူတိုင်းဟာ မချစ်ပေမယ့် အမြဲလက်တွဲပေါင်းသင်း နေကြရတာ ဒီရန်သူကြီးပဲပေါ့ ။ အိုတာကြီးကို မကြိုက်ပါဘူး ။ မချစ်ပါဘူးဆိုတော့လည်း ဒါကြီးကိုပဲ ချစ်နေရဦးမှာပဲလေ ။ မချစ်ခင်ဘူး ၊ မနှစ်သက်ဘူး ဆိုပေမယ့် ဘ၀သံသရာ အစကတည်းကမှ ဒီ အို ၊ နာ ၊ သေ နဲ့ ပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြရတဲ့ ဘ၀တွေက မရေမတွက်နိုင်ပါဘူးနော် ။ အင်း နုပျိုတာမှ ကြိုက်ပါတယ် ဆိုပြန်တော့လည်း အိုမင်းခြင်းနဲ့သာ လက်တွဲပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ အိုလိုက် လာတာသာကြည့် ပေတော့ ။ ဒါတောင် ကိုယ်က အာခံပြီး နုပျိုအောင် ပြုပြင် ချင်သေးတယ် ၊ ဖန်တီးချင်သေးတယ်နော် ။ ဘယ်လိုပဲ ပြုပြင်ဖန်တီးပါစေ “အိုခြင်း” ဆိုတဲ့ မချစ်တဲ့ သူနဲ့က ချစ်ခင်စွာ ပေါင်းသင်းနေရပြီပဲ ။ အင်း ဒါကြောင့်လည်း ဒုက္ခတွေရောက်နေရတာပေါ့နော် ။ ရှိတဲ့ အသက်ထက် ငယ်တယ် ထင်ရအောင် ပြုပြင်ရ ၊ ဖန်တီးရတဲ့ ၀န်တွေပိုလာတာပါပဲ ။
အင်း ဒီအိုခြင်းကြီးကို မရလိုလို့လည်း ရွေးချယ်ခွင့်မှ မရှိတာပဲလေ ။ ဒါကြီးနဲ့ပဲ အမြဲပူးတွဲ ပေါင်းသင်းနေရလေတော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ၊ တစ်လထက်တစ်လ ၊ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် အမြင်တွေက မွဲလာပြီ ။ ခါးတွေက ကိုင်း လာပြီ ။ ဆံပင်တွေက ဖြူလာပြီ ။ သွားတွေက ကျိုးလာပြီ ။ မသွားနိုင် မလာနိုင် အိပဲ့ အိပဲ့ နဲ့ တဖြည်းဖြည်း အိုခြင်းတရားကြီးက လက်စွမ်းတွေပြလာပြီ ။ အော် ကိုယ်က ဒီရန်သူကြီးနဲ့ အတူပေါင်းသင်းလာရပြီပဲ ။ ဘာတတ်နိုင်ဦး မှာလဲနော် ။ အင်း … ဒီလိုကနေ အိုလို့တင် မပြီးသေးဘူး။ အိုရာကနာ လာပြီလေ ။ ဟိုနားက ကျွတ် … ကျွတ် … ဒီနားက ကျွတ်…ကျွတ် နဲ့ ဒါဆိုရင်တော့ အိုခြင်းက လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်လို့ “နာခြင်း” နဲ့ ပေါင်းသင်း ရပြန်ပါပြီ ။ ဒီ “နာခြင်း” ကြီးရော ချစ်ရဲ့လား ? လိုချင်ရဲ့လား ? နှစ်သက် ရဲ့လား ? ဆို တော့ တစ်စက်မှကို ကြည့်မရတာ ။ ဒီ “နာတယ်” ဆိုတဲ့ အသံတောင် မကြားချင်အောင် မုန်းတာနော်။ ဒါဆိုသူသည် ကိုယ့်ရဲ့ မချစ်မနှစ်သက်သူ ရန်သူကြီးပဲမလား ။ အင်း ဒီရန်သူကြီးကို မချစ်ပေမယ့် ပေါင်းသင်း နေရပါ လား။ သြော် ဒုက္ခ … ဒုက္ခ ။
ဒီခန္ဓာ ကြီး ရထားမှတော့ (တနည်း) ဒီခန္ဓာကြီး ချစ်ခင်စွဲလန်းနေမှတော့ ဒီကမွေးဖွားလာမယ့် အိုခြင်း ၊ နာခြင်းတွေကိုလည်း မချစ်မနှစ်သက်ပေမယ့် လက်တွဲနေရပါတယ် ။ သြော် … ရန်သူ့လက်အောက် ရောက်နေရတဲ့ ဘ၀ပါလားနော် ။ အင်း ဇာတိ ရလာရင်တော့ ဒီ အိုခြင်း ၊ နာခြင်း တွေနဲ့ သေချာပေါက် ပေါင်းသင်းရမှာပါလားလို့ အရင်က တစ်ခါမှ မစဉ်းစားမိလေတော့ ဒီခန္ဓာကြီးအတွက် ဆုတွေတောင်းခဲ့တာ။ ကောင်းမူ့ ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီး တလွဲတွေ ဆုတောင်း ခဲ့တာတွေလေ ။ ရန်သူကိုမြင်မှ မမြင်ပဲကိုး ။
အရင်က အကြောင်းတရားတွေကြောင့် အခုတော့ အကျိုး “ဇာတိ” ရလာကြပြီ ။ ဒီတော့မှ လက်ရှိအချိန်ထိ ဒီနေ့တော့ တစ်ရက်လောက် ဒီမချစ်တဲ့ ရန်သူနဲ့ ခွဲနေပါရစေလို့များ ဆုတွေ တောင်းလို့ တစ်ရက်လောက် “မအို” အောင် ၊ “မနာ” အောင် နေခွင့်လေးများရကြရဲ့လားလို့ ။ သြော် ဒါကြောင့်လေ ငါတို့ဟာ ဒီခန္ဓာကြီးရတာနဲ့ပဲ ဒီ အို ၊ နာ ၊ သေ ရန်သူ လက်ထဲတန်းအပ်ခံ ရပြီလို့သာတွေးမိပါရဲ့။ အင်းလာပါတော့မယ် “သေခြင်း တရား” ကြီးကလေ ။ သူကျပို တောင်ကြောက်ကြတယ် ။ မုန်းကြတယ် ။ မလိုချင်ကြဘူး ။ မချစ်မနှစ်သက်ကြဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူက ဘယ်သူ့များ မျက်နှာသာပေးပြီး သေခြင်းမှလွတ်စေလို့ရှိရဲ့လား ။ ဝေးပါသေးတယ် ။ အင်း ဒီမချစ်မနှစ်သက်သော ရန်သူဖြစ်တဲ့ “သေခြင်း” နဲ့လည်း တစ်နေ့တော့ ပေါင်းသင်းရပါဦးမယ် ။
ခုတော့ အိုခြင်း ၊ နာခြင်း ဆိုရဲ့ ရှေ့ပြေး ရန်သူတွေရဲ့ နှိပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ကိုခံပြီး မချစ်သော်လည်း အောင့်အည်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနေရပါတယ် ။ ဘယ်နေ့ ၊ ဘယ်ရက် ၊ ဘယ်အချိန်မှာများ ၊ သေခြင်း ရန်သူက လက်ကမ်း လိုက်မလဲတော့ မသိနိုင်တော့ပါဘူး ။ အဲဒီ အချိန်ကျရင်တော့လေ မချစ်မနှစ်သက်သော ရန်သူ သေမင်းရှေ့မှာ ဒူးထောက် ရတော့မှာပါလား ။ ဒါကြောင့် အိုခြင်း ၊ နာခြင်း ၊ သေခြင်းတွေနှင့် မချစ်မနှစ်သက်ပါသော်လည်း ချစ်ခင်ပေါင်းသင်း ရခြင်းဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ရန်သူကြီးတစ်ပါး ပဲ မဟုတ်ပါလား ။
ဒါဆိုရင် တို့တွေအတွက် ရန်သူမျိုး(၅)ပါး ထဲက ဘယ်သူဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာ အဖြေထုတ်နိုင်ပါပြီနော် ။ မနော ရေယဉ် နဲ့တူတဲ့ “ရေ” ရန်သူပဲလား ? လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ မီးတွေ နေ့စဉ် အလောင်ခံနေရတဲ့ “မီး” ရန်သူများလား ? အမြဲတမ်း တစ်မျိုး မဟုတ် တစ်မျိုး လှည့်ပြီး နှိပ်စက်တတ်သော သတ္တိရှိတဲ့ “ကံ ၊ စိတ် ၊ ဥတု ၊ အာဟာရ” ဆိုတဲ့ “မင်း” များလား ? နေ့စဉ် ခိုးဝင်ပေါင်းသင်း နှိပ်စက် တတ်တဲ့ အာရုံ ပုံရိပ် နဲ့တူတဲ့ “ခိုးသူ” ကို ပို ကြောက်ရမလား ? ဒါမှမဟုတ် အိုခြင်း ၊ နာခြင်း သေခြင်း ဆိုတဲ့“မချစ်မနှစ်သက်သော ရန်သူကြီး”နှင့်အတူလက်တွဲ ပေါင်းသင်း ရတဲ့ ဘေးရန်ကြီးပဲလားဆိုတာ တစိမ့်စိမ့် တွေးရင်း ဒီရန်သူမျိုး(၅)ပါး လက်က အမြန် လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ နည်းစနစ်တကျ ကြိုးစား ရုန်းထွက်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော် ။
ဒီတစ်သက် ရုန်းထွက်ဖို့ လွယ်ပါတော့မလား ဟူးဟူးရေ
အခက်ကြီး ခက်နေရပါတယ်ဗျာ ။
လွယ်တယ်လို့လည်း မဟုတ်သလို ခက်သလားဆိုတော့လည်း မခက်ပါ။
စဖြစ်ဖို့သာ အဓိကမို့ ရုန်းထွက်လိုသောစိတ်ကလေးကိုသာ တန်ဖိုးထားကြိုးစားလိုက်ပါလို့သာ အကြံပေးပါရစေ။ လွယ်တာခက်တာကထက် စဖြစ်ဖို့က ပိုခက်နေတယ်နော်။ သတိ။
မချစ်မနှစ်သက်သော သူ ဆိုတာထက် .. အမွေခံသားဆိုးသမီးဆိုး ဆိုတာ ပိုမမှန်ဘူးလား.. ကိုယ်မချစ်မနှစ်သက်သော သူတိုင်းနဲ နေစ၇ာမှ မလိုတာ.. မပတ်သက်၇င် ပြီးတာပဲလေ..
သားသမီးဆိုးက မှ မပတ်သက်လို့လည်းမ၇ မဆိုင်လို့လည်းမ၇ မနေလို့လည်းမ၇ မဟုတ်ဘူးလား
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျနော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ သားသမီးဆိုးဆိုတာကလည်း ကိုယ်နဲ့က သေထိ အတူနေမသွားရဘူးလေ။ တချို့ သက်ဆိုးမရှည်ကြတဲ့သားသမီးတွေကျတော့ သူတို့က အရင်သေသွားတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်ထောင်တွေခွဲထွက် သွားတာမျိုး လည်း ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ အဲလိုအနေအထားမျိုးမှာ ကိုယ်ကလွတ်မြောက် ကောင်းလွတ်မြောက်နိုင်ပါသေးရဲ့။ ခု ပြောမယ့် အို၊နာ၊သေကတော့ သူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခထက် အဆများစွာ ဒုက္ခပေးနေတာမို့ ခန္ဓာရှိသမျှမလွတ်အောင် ခံနေရမယ်ဆိုတာလေးတွေးမိတာကြောင့် မချစ်မနှစ်သက်သောသူလို့ တင်စားလိုက်ရပါတယ်။